Rayson RAYSON NONWOVON FABRIC Manufurer sy mpamatsy
Nanomboka tamin'ny taona 2007
Rayson dia nanamboatra PP Spunbond Non Wovern Wovric, SS Non Woverned, lamba tsy nofon-doha, tsy lamba vita amin'ny fambolena sy fambolena tsy misy fambolena.
Rayson RAYSON NON WEVEN LAM
Rayson dia nanolo-tena tamin'ny fikarohana tsy noforonina, fampandrosoana sy famokarana. Ny vokatra lehibe dia ny lamba tsy namboarina, SS Non Wovernon, SMS Non Wovern WOBRIC, Meltblown Non Woverned, fanjaitra tsy misy lamba tsy misy lamba ary slunla tsy misy lamba.
Blue SS tsy misy lamba vita amin'ny lamba 25gr width 175mm ho an'ny saron-tava
izanyBlue ss tsy lamba vita amin'ny lamba ampiasaina amin'ny sosona voalohany saron-tava. Raha ny mahazatra dia 25gr sakany 255mm. Ny lamba tsy misy lamba dia malefaka sy fofonaina ary rano. Ary io lamba ss ss manga tsy misy ranon-jaza novokarin'i Rayson dia afaka manome antoka ny kalitao.
Mpanamboatra matihanina amin'ny takelaka tsy misy takelaka (roll) any Sina
Ny takelaka tsy misy takelaka, fantatra amin'ny lamba latabatra TNT, dia lamba vita amin'ny fitaovana polypropylene. Miaraka amin'ny tombony azo avy amin'ny sariaka sy mora ampiasaina ary azo ampiasaina, tsy polypropylene dia ampiasaina amin'ny trano fisakafoanana, hotely, ary hetsika manokana toy ny fety, ny vokatra lehibe dia tsy misy takelaka lehibe Roll, TNT LATGER RUNNER, TOROHEVITRA TAMIN'ANDRIAMANITRA SORATRA ARY TSY MISY ZAVATRA INDRINDRA.
Lamba malefaka / hydrophilic non woven lamba
SS Non Wovernic dia vita amin'ny teknolojia avo roa heny. Moa ve ianao low ny famaritana lamba hydrophilic? Ny sasany amin'ireo lafin-javatra mampihetsi-po amin'ity lamba tsy voahosotra ity dia fofonaina, malefaka, hidrofika ary tsy mampidi-doza. Ity karazana lamba hydrophilic ity dia ampiasaina ho toy ny fitaovana anatiny anaty saron-tava. Rayson dia mpanamboatra lamba ranon-tsolika tsy misy fombafomba matihanina, miaraka amin'ny traikefa an-taonany maro.
SS Non woven Disposabit Hopitaly
SS Non-Wovernic dia fitaovana tsara ho an'ny famokarana fandriana hopitaly, natao ho an'ny fandriana fandriana, fandriana hopitaly ary fandriana hôpela. Ireo fandriana ireo dia azo esorina, novokarin'ny fandriana fatoriana tsy azo tononina, ny dikany dia manome vahaolana fahagagana nefa mahomby amin'ny toeram-pitsaboana rehetra.
RAYSON NON Company dia orinasa mpanamboatra lamba tsy misy lamba ary mpamatsy ao Shina izay manana traikefa 15 taona amin'ny famokarana tsy nofon-dratsy sy r&D. Ny rafitra fitantanana kalitao tsara sy ny traikefa manankarena dia afaka miantoka ny kalitao maharitra sy tsara
Ny ekipa mpivarotra manana traikefa an-trano amin'ny 15 taona dia afaka manome serivisy matihanina amin'ny teny anglisy, espaniola, italiana, ary arabo. Ny vokatra dia amidy amin'ny firenena maherin'ny 40 manerana izao tontolo izao.
Rayson dia manana tsipika famokarana lamba 10 Ny karazana vokatra dia ny lamba tsy misy kofehy, sms, lamba vita amin'ny menaka, ary fanjaitra tsy voan-tongotra, ary manofa lamba tsy misy tenda.
Ny famolavolana ara-pitaovana lava be dia be ao amin'ny trano fitehirizam-bokatra ao amin'ny trano fitehirizam-bokatra dia miantoka ny fahamarinan'ny vidin'ny vokatra.
Momba an'i Rayson
Foshan Rayson Non Woven Co., Ltd. Vondron-taona miaraka am-piarahamonina ny volana Sino-Etazonia, napetraka tao amin'ny tanànan'i Foshan Shishan avo lenta, latsaky ny 30 minitra avy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Guangzhou Baiyun Baiyun Baiyun, faritra iray metatra toradroa sy metatra toradroa ary mampiasa olona 400 mahery. Ny orinasa dia manampahaizana manokana amin'ny famokarana lamba tsy misy tenona sy ny vokatra tsy namboarina, izay misy 90 isan-jaton'ny vokatra azony amidy amin'ny firenena 30 mahery.
Foshan Rayson Non Woven Co., Ltd. Dia mpanamboatra efa zatra ao amin'ny indostrian'ny lamba tsy misy fako miaraka amin'ny traikefa an-taonany maro. Natao ho an'ny fikarohana sy fampandrosoana sy famokarana tsy ampivoarana ny famokarana lamba vita amin'ny lamba tsy misy fambolena, afaka mamokatra lamba tsy misy pop, SS Non Ny famokarana lanja ny lanjany avy amin'ny 10GSm ka hatramin'ny 150gsm ao anatin'ny 4,2M sakany, miaraka amin'ny vola famokarana isan-taona mandanja mihoatra ny 36000 taonina. Ny orinasa dia mahavita mamokatra lamba tsy vita amin'ny loko sy habe maro samihafa, mifanaraka amin'ny fampiasana maro samihafa.